Ahoana no fomba hieritreretana alohan'ny hitenenana: Dingana 6 TSY maintsy raisinao - Blog
Efa nilaza zavatra nanenenanao ve ianao avy eo?
Mazava ho azy fa manana ianao.
Ny olona rehetra manana.
ny fomba hanombohana indray amin'ny zazavavy
Efa mba nisy teny notenenina ve ianao ho anao izay irinao tsy ho voalaza?
Ny olona rehetra efa niaina an'io.
Tsy voafehintsika amin'izay lazain'ny hafa amintsika. Saingy manana fifehezana betsaka momba izay holazaintsika amin'izy ireo isika.
Ny teny lazaintsika dia mety hampiorina na handrava. Ny teny ataontsika dia afaka mamporisika na mihodina. Ny zavatra lazaintsika dia afaka manasitrana na manimba.
Misy fomba sasany izay tsy hiafarantsika hanenina amin'ny teny lazaintsika? Fomba sasany hanatsarantsika izay lazaintsika?
Soa ihany fa afaka manatsara be ny kabarintsika amin'ny fanarahana fitsipika tsotra iray: mieritrereta alohan'ny hitenenana.
Izay mora lazaina. Fa ahoana no fomba hizorantsika izany amin'ny fomba azo ampiharina?
Eny, raha ny mieritreritra alohan'ny hitenenanao no tanjona dia tiako ny manolotra fanafohezana izay tokony hanampy anao hanao izany.
Raha ny marina dia tena akaikin'ny teny hoe 'mieritrereta.' Io ilay teny hoe T-H-A-N-K-S.
Misaotra isika rehetra raha sariaka sy tsara fanahy ny teny noresahina taminay. Toy izany koa ny hafa hisaotra raha ny teninay tsara sy mahasoa.
Andao hojerentsika ny fanafohezana T-H-A-N-K-S, ary jereo ny fomba hanampiany antsika tsy hiteny zavatra izay haintsika indray andro any.
T = Marina
Manomboka amin'ny teny hoe marina isika. Izay holazainao ve marina? Raha tsy izany dia tsara kokoa ny mangina.
Ahoana no ahalalanao fa marina izany?
Raha mitanisa izay henonao fotsiny ianao dia tsotra. 'Nilaza tamiko i John fa ho tara izy rahampitso.'
Tsy maminavina ny fotoana hahatongavan'i John ianao. Tsy milaza ianao fa ho tara i John na tsia. Mitory an'izany fotsiny ianao Hoy i John ho tara izy rahampitso.
zavatra tokony hatao ao an-tranonao rehefa mankaleo ianao
Ka inona no lazainao dia marina.
Saingy mazàna dia sarotra kokoa noho io. Rehefa manao fanambarana milaza ho mahalala zavatra iray isika dia tokony hanana antoka fa marina izany.
Inona no loharanom-baovao? Azo itokisana ve ny loharano? Azontsika antoka fa marina ny nandrenesantsika? Izao fotsiny ve ny hevitray fa lany marina isika? (fambara: somary fisainana mitsikera manampy amin'ireo tranga ireo)
Raha milaza zavatra isika momba ny olona iray hafa, mbola zava-dehibe kokoa aza ny mahitsy sy marina. Ny resadresa sy ny honohono dia miroborobo amin'ny fampahalalana diso na fanambarana izay tsy marina.
Aza manadio ny lainga. Alao antoka fa marina izay lazainao. Alao antoka fa marina izany.
Ka raha tsy fantatrao dia tadiavo. Raha tsy azonao antoka, jereo indroa. Raha fantatrao fa tsy marina izany dia aza lazaina izany.
H = Manampy
Tsy ampy ny miteny izay marina. Izahay koa te hiteny hoe inona izany manampy
Tianay hihatsara ny toe-javatra noho izay nolazainay. Tianay ny miteny teny manampy fa tsy manelingelina.
Betsaka ny fomba ahafahantsika miteny teny manampy.
Mitenena teny fampaherezana
Manolora fiderana amin-kitsimpo
Manolora soso-kevitra mahasoa
Omeo fampitandremana namana
Asehoy ny fankasitrahana
Mazava ho azy, indraindray ny resadresaka ataontsika dia mifototra amin'ny fifanakalozana namana izay kely fotsiny noho ny fahatratrarana. Mifampizara fampahalalana izay ahafahan'ny olona mahalala ny fomba fanaovanay na izay kasainay.
Fa na dia amin'ny resaka toy izany aza dia tokony hanampy amin'ny fomba sasany ny tenintsika. Raha tsy misy afa-tsy ny manome toky ilay olon-kafa fa afaka miaraka amintsika izy ireo ary afaka ny ho manodidina antsika izy ireo.
A = Manamafy
Na dia tsy tokony ho tanjona maha-mandroso-tena aza ny resaka ataontsika, dia tokony ho izany ihany anefa ny tenintsika manamafy ireo izay iresahantsika.
Amin'ny fanamafisana fa tsy midika fandoavana fiderana aho. Na dia manamafy aza ny teny fiderana. Tsy miresaka momba ny pep peppers manokana aho. Na dia mila iray aza isika indraindray ary mila azy ireo ny hafa.
Ny tiako resahina dia ny miresaka amin'ny olon-kafa amin'ny fomba izay hanamafisanao azy ireo ho olombelona mendrika fanajana.
Miresaka amin'izy ireo ianao raha toa ka maninona izy ireo. Tsy aminao ihany, fa amin'ny zanak'olombelona.
Ahoana no anaovanao an'io? Fomba maromaro.
Mifandraisa amin'ny masonao
Avereno ny tenin'izy ireo
Raiso am-po izay lazain'izy ireo
Miresaha amin'izy ireo toa anao miahy azy ireo amin'ny maha-olona azy
Isika rehetra dia te-hahatsapa ho voamarina. Isika rehetra dia te hino sy hahatsapa fa maninona isika amin'ny lafiny sasany.
Izay sendra miresaka ianao dia te hamafisina toa anao ihany koa. Ka hamafiso izy ireo amin'ny teny nolazainao.
10 antony tiako Neny
Torohevitra 10 hanampiana ny mpivady hifampiresaka mahomby kokoa amin'ny fifandraisan'izy ireo
Ahoana ny fomba fitoniana rehefa tena tezitra ianao (+ zavatra 7 TSY tokony hatao)
N = Ilaina
Ity angamba no sarotra indrindra amin'ny 6 amin'ny fitetezana. Rahoviana no zavatra ilaina lazaina? Rahoviana izy io no manampy fotsiny? Rahoviana no manimba?
Mazava ny tranga sasany…
Raha misy miomana ny hitondra fiara rehefa mody be loatra izy ireo, dia te hiresaka mivantana amin'izy ireo ianao ary milaza aminy fa tsy azo antoka na fahendrena ny mitondra fiara mody amin'ny toe-pahasalamany. Mety tsy hankasitrahana ireo teny toa izany, saingy tsy dia ilaina loatra.
Amin'ny fotoana hafa, misafidy ny hiteny teny izay tsy ilaina fotsiny isika mampidi-doza . Angamba tsy amin'ny fomba azo tsapain-tanana sy azo tsapain-tanana. Fa manimba ilay olona amin'ny fientanam-po na ara-tsaina izy ireo.
Izany no fototry ny tsikera tsy misy fananganana. Fitsikerana izay natao bebe kokoa ho tombontsoan'ny gazety noho ny mpihaino. Mora tokoa ny mitsikera. Sarotra kokoa ny manamafy.
Tena ilaina ve ny miteny amin'ny olona iray hoe 'tara foana ianao'? Mamporisika azy ireo hahay handanjalanja kokoa ve izany? Tsy azo inoana.
ny olon-tiako tsy tia ahy intsony
Tsara kokoa ny mampahatsiahy azy ireo tsotra fa zava-dehibe ny fahatongavana ara-potoana rehefa tena afaka manao zavatra momba izany izy ireo.
Tena ilaina ve ny miteny amin'ny olona iray hoe: 'Tsy handany vola na oviana na oviana ianao'? Izany ve ampaherezo izy ireo amin'ny fomba sasany? Mazava ho azy.
Ho tsara lavitra toy inona moa ny fanamby azy ireo hivoatra. Raha hiresaka fanovana manokana iray izay mety hahasoa. Ary hanao izany amin'ny fahalemem-panahy sy ny fikarakarana.
Ny fehiny raha ny amin'ny filàna dia ny manontany tena amin'ny tenanao alohan'ny hitenenanao hoe: 'Ilaina ve izany?'
Ny fametrahana fotsiny ny fanontaniana dia matetika no manome ny valiny tsara indrindra. Raha ilaina dia tohizo. Raha tsy izany dia tazomy ho anao irery amin'izay misy azy.
K = Tsara fanahy
Mety nahatsikaritra ianao fa ny tontolontsika dia tsy dia olom-banona firy noho ny taloha. Betsaka ny fankahalana eo amin'ny fiarahamonina maoderina ka manaitra ny mahita ny olona eny amin'ny kianja malalaka miteny tsara amin'ny hafa. Indrindra ho an'ireo mpanohitra azy ireo.
Na mpiara-miasa na namana na mpiara-miasa na mpanohitra ny olona iray hafa dia azonao atao ny miresaka aminy amin-katsaram-panahy. Ary tokony. Tsy misy azo azo raha tsy izany.
Ny teny tsara dia teny fahalalam-pomba. Teny izany mampita fanajana . Miorina ny teny tsara fa tsy mandrodana. Mamporisika izy ireo ary manao ny andron'ny olon-kafa na ny dia ataon'izy ireo aza somary mora sy mahafinaritra kokoa.
Ny teny tsara dia malalaka miteny. Mila ezaka kely fotsiny ny milaza zavatra tsara fa tsy zavatra mitsikera, masiaka, ratsy toetra, na masiaka .
Voalaza fa maimaim-poana ny teny. Izany ny fomba fampiasanao azy ireo Mety handany anao izany.
Ny teny tsara dia asa soa, be fiheverana, fahalalam-pomba ary sariaka. Ny teny tsara fanahy avy amin'ny olon-tsy fantatra dia mety hahatonga ny andron'ny olona ara-bakiteny. Ataovy ilay olona manolotra teny tsara.
Araka ny voalaza:
Amin'ny maha olona iray ahy dia tsy afaka manova izao tontolo izao aho, fa afaka manova ny tontolon'ny olona iray.
Ataovy izay hanova ny tontolon'ny olona iray amin'ny alàlan'ny teny tsara nataonao.
S = tso-po
Ny fitsapana farany ny 'misaotra' alohan'ny hitenenanao dia fahatsoram-po. Ny tso-po dia mitovy amin'ny fanaovana ny marina, fa tsy mitovy.
Ny milaza ny marina dia milaza izay marina. Ny milaza ny marina dia milaza izay tena izy. Mora ny milaza ny marina nefa tsy tso-po. Sarotra kokoa ny tso-po raha tsy manao ny marina.
Atahorana hitranga amin'ny ankapobeny, matetika ny mpisolovava sy ny mpanao politika dia miteny teny marina fa tsy tso-po. Ny tenin'izy ireo dia mahitsy amin'ny ambaratonga fa tsy mandainga izy ireo. Tsy tso-po ny tenin'izy ireo satria minia mamitaka na mamitaka.
Betsaka ny mpisolovava marina, marina ary tso-po. Ny mpanao politika koa. Fa ny tsy fihatsarambelatsihy sy ny tsy fahamarinana dia fahita eo amin'izy ireo.
Rehefa tso-po isika dia mety hilaza zavatra izay tsy tena zava-misy akory, fa ny tanjontsika dia mendri-kaja.
efitrano fankalazana wwe 2017
Misy ny fotoana hanaovana ny marina amin'ny fomba feno habibiana. Matetika io fotoana io dia misy olona mangataka anao. Amin'ny fotoana hafa dia mety ho tso-po tanteraka tsy misy zava-misy marina isika. Mitranga mandrakariva izany.
Misy manontany anao hoe manao ahoana ianao ary mamaly amin'ny 'namana' tsara ianao. Rehefa marina dia tsy dia tsara loatra ianao amin'izao fotoana izao.
Mety hisy hanontany ny safidinao ary hanaiky azy ireo ianao. Tena manana safidinao ianao, nefa manolotra am-pahatsorana ilay olon-kafa tombontsoa hisafidy.
Indraindray ny teny fampaherezana anay dia tsy 100% nefa tena 100%. Lazainay amin'ny olona fa hilamina ny zava-drehetra, rehefa lalina dia fantatsika fa tsy hisy izany. Farafaharatsiny mba tsy ho araka ny fiheveran'izy ireo izany.
Indraindray isika dia mahafoy tena amin'ny fahamarinana mba ho fahatsoram-po sy hatsaram-panahy. Mahatonga an'izao tontolo izao ho toerana mpinamana kokoa.
Hofaranako amin'ny hady izay misy singa manan-danja amin'ny lahatenintsika.
Dia tsy heverinao ho zavatra malaina io,
Teny mahafinaritra holazaina
Ny endrika itafianao, ny eritreritra entinao,
Mety sitrana na vaky ny fo.
Ary avelako ianao hampahatsiahy anao ny andraikitra sahanintsika raha ny amin'ny teninay:
Mitandrema amin'ny teninao. Raha vao lazaina izy ireo dia azo avela fotsiny ny famelan-keloka fa tsy hadino.
famantarana tsy ho tafiditra aminao mihitsy izy
tsy manana namako hiaraka aho
ahoana no ilazana raha misy mpiara-miasa mila anao
inona no hahagaga ny sakaizanao